5 Nzira dzeBlockchain Advertising Inovhiringa Tsika Media - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
blockchain, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
5 Nzira Blockchain Kushambadzira Kunokanganisa Tsika Midhiya
Apo patinotaura pamusoro Blockchain, inowanzo dudzira ku cryptocurrencies, mari, uye digital ledger. Zviripachena, zvine musoro nekuti Blockchain ndiyo tekinoroji inotyaira maBitcoins uye inogonesa mari yemadhijitari kana midziyo yedhijitari kufamba kubva kune mumwe munhu ichienda kune imwe nenzira yakachengeteka inogoneka uye pasina kubatanidzwa kwechero munhu wechitatu. Zvisinei, Blockchain ine zvakawanda zvinokwanisa kupfuura izvi, uye imwe chikamu chakadai chichava nemhedzisiro inovimbisa Blockchain Kushambadzira.
Inogona sei Blockchain Kushambadzira kunounza shanduko?
Iine online kushambadzira kubiridzira kuri kuwedzera pamitengo inotyisa uye kune avo vanomanikidzwa nechiono chekuburitsa pachena uye chisina hunyanzvi midhiya nzvimbo, Blockchain ichauya senzvimbo yekutandarira. Ngationei kuti sei.
1.Dhijitari Ad kubiridzira shrinkage:
Iyo Digital Media indasitiri iri kutambura zvakanyanya nekuda kwekubiridzira ad, bot clicks uye gumi nemaviri ekududzira zvisirizvo. Makambani mazhinji enguva haakwanise kuongorora kana Ads dzavanoisa nekubhadhara dziri kushandura munguva chaiyo nekuti dzimwe nguva tinya Ads anogadzirwa ne bots. Izvi zvinotoita kuti mari yakawanda iparadzwe sezvo Ads yaisagona kutariswa sezvaifanirwa kunge zvaitwa. Blockchain Kushambadza kucharatidza kuve mhinduro seyose Blockchain yakavharidzirwa uye iri pachena uye nokudaro inovimbisa kuti Ad Metrics inotariswa.
Kune vanoshambadza kuti vawane kudzoka chaiko pa inivhesitimendi, Los Angeles inotanga, MetaX ndiyo yekutanga yerudzi rwayo kushandiswa Blockchain against Ad frauds. Kumagumo emushambadzi, inopa mhinduro yakavimbika yekutevera uye kuona zvese zvinoonekwa. Zvakare, ivo vanopa vaparidzi kutonga uye kugona kuchengetedza kukosha kwakazara kwavo gutsikana kukwezva premium ad inoshandiswa.
MetaX ine chikamu chayo, AdChain inoshandisa chiratidzo chechizvarwa chekuziva hunyengeri uye kuvashatisa munguva chaiyo. Uyezve iyo yese yekuratidzira data inochengeterwa Ethereum kuita kuti isachinjike uye inovimbisa pachena muData mangetani ekupa.
Ida zvaunoverenga? Wobva waisa maoko pamusoro Blockchain eBook pano:
2. Inobvisa Middleman:
Blockchain inogona kuita zvirinani kana zvasvika pakuvandudza mutengo we impression ratio. Inogona kutochinja maitiro ekushambadza zvachose zvekuti makambani anobhadhara zvakananga vatengi vavo kuti vaone kushambadza kwavo, vobva vaonekawo kune ad kutenga maitiro zvachose. Kushandisa a Blockchain nzira ipfungwa yakanaka chose sezvo mari isingazoiswe mumaoko evamiriri, asi vatengi pachavo.
Ikozvino yekushambadzira modhi yakanyanya kusagadzikana uye inoda kuwedzeredza kukuru. Pfungwa yekushambadzira yakanangwa pamwe neinjini yakatemerwa inogona kungove chishandiso chinoshanda kune vese vatengi nemakambani madiki uye makuru zvakafanana. Munguva yakapfuura, Vashambadziri vaishandisa kuwana ruzivo nezve vatengi vavo kubva kwakasiyana-siyana kwakapararira masosi. Asi na Blockchain, vashambadziri vanove nekwanisi yekuvaka mutengi chimiro kubva kune data mutengi anoda kugoverana mune imwechete scoop. Izvi zvinobvumidza kushambadza kune zvinodiwa nevatengi uye kushandisa kushambadzira bhajeti chete kune vatengi vanogona kutenga chigadzirwa chako uye nekudaro chengetedza mamirioni emari mushambadziro yaunoshandisa gore rega.
4. Kubata kweDhijitari Midhiya Kodzero:
Blockchain inogona kupa kurumbidza shanduko muDhijitari Media nzvimbo. Izvo chaizvo zvichagadzirisa nyaya dzine chekuita neDhijitari Kodzero Kuratidzira muindasitiri yenhau. Akavhiringidzika kodzero dzekopi dzinonetsa kwazvo mu media uye varaidzo chidimbu. Blockchain inouya serununuro sezvo pasina mubatanidzwa munetiweki unogona kukumbira kodzero dzevaridzi. Blockchain inogona kuchengetedza midhiya mafaera, nziyo, chivharo uye kugadzirwa mune yakanyanya encoded uye encrypted fomati. Muchokwadi, inopa "Smart contract" yekugonesa kubhadhara otomatiki kwemari.
5.Data Yakavanzika uye chengetedzo:
Nevanhu vachiwedzera kungwarira ku Kuvanzika kwedata mazuva ano, Blockchain ichawana chinodiwa. Vashambadziri vanogona kuwana kudikanwa kwekudzidzisa Blockchain mune yakanangwa kushambadzira modhi. Nekushandiswa kwe Blockchain, kupindirana kwega kwega kwaizorondwa kune kero kwete zita. Blockchain inogona kuunza mwero wekujekesa mune dhata uye ruzivo chikamu icho parizvino chisingawanikwe kune vashandisi veDhijitari Media. Iwe unogona kusarudza kuti ndeupi ruzivo rwekuti upfuure uye kuna urikutengeserwa. Izvi zvichanyatso kuvaka modhi yemari yevashandisi veDhijitari Media vanozobhadharwa zvakananga neruzivo rwavari kugovana.
Nenzira yakanaka, Blockchain yashamisa nyika nekuda kwekugona kwayo kukuru mune mamwe misika. 2018 richava gore richaratidza zvakasiyana-siyana zve Blockchain maapplications mukati medhijitari uye muchinjika-skrini advertising. Zvakare, yakakwira CPM's uye yakaderera vhoriyamu inogona kutokonzera TV uye premium vhidhiyo kuchinja kwairi Blockchain Kushambadzira mumakore anotevera.
Une chirongwa mumusoro? Wobva watambanudzira kwatiri kubvunza.